लोकसेवा उपयोगी सामग्री–७ Bizshala -
भोकमरी सूचकांकमा नेपालको अवस्था बुझ्नुहोस्, नमुना प्रश्नपत्र हल गर्नुहोस्
काठमाण्डौ । दसैँ सकिएर तिहारको रमझम सुरु भइसकेको छ । तिहार विशेषगरी दिदीबहिनी र दाजुभाइको चाडका रुपमा बुझ्ने गर्छौं। भाइटीकाका दिन दिदीबहिनीले दाजुभाइको दीर्घायूको कामना गर्दै टीका लगाइदिन्छन् । यही बेला उनीहरुलाई आफ्ना दाजुभाइको सुख र प्रगतिको कामना पनि गर्छन् । सुख त मनको कुरा तर प्रगति गर्न मेहनत चाहिन्छ नै । त्यसपछि आफ्नो पढाइ र अध्ययनलाई बढी जोड दिनुपर्छ । बिजशालाको उद्देश्य पनि त्यही हो। आफ्ना पाठकलाई अध्ययनशील र ताजा घटना जानकारी गराउने।
आज हामी यो लोकसेवा विशेष सामग्रीको सातौँ संस्करणमा आइपुगेका छौँ । लोकसेवा विशेष सामग्रीलाई हाम्रा पाठकले निकै रुचाइदिनुभएको छ । भविष्यमा यसलाई अझै परिस्कृत बनाउने हाम्रो योजना छ ।
हाम्रो टिम युवा सबलीकरणमा जोड दिन्छ । त्यसैले हामी युवालाई लोकसेवाबाट लिइने कुनै पनि निकायको परीक्षामा सक्षमताका प्रस्तुत हुन सकून् भन्ने ध्येयका साथ हरेक सोमबार लोकसेवा विशेष सामग्री पस्किँदै आइरहेका छौँ । आज पनि हामीले समसामयिक घटनाक्रमसँगै एउटा नमुना सेट प्रस्तुत गरेका छौँ । समयसामयिक घटना पढ्नुहोस् र नमुना सेट हल गर्नुहोस् ।
अन्तर्राष्ट्रिय गरिवी निवारण दिवस, २०१९
अन्तर्राष्ट्रिय गरिवी निवारण दिवश २०१९ को नारा ‘याक्टिङ टुगेदर फर इम्पावर चिल्ड्रेन, देअर फेमलिज् एन्ड सोसाइटिज् टु इन्ड प्रोभर्टी’ रहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय गरिवी निवारण दिवस हरेक वर्ष अक्टोवर १७ मा मनाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय गरिवी निवारण दिवसड्डसन् १९९३ बाट मनाउन थालिएको हो । हाल नेपालमा गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यास १८.७ प्रतिशत, बहुआयामिक गरिवी २८.६ प्रतिशत रहेको छ भने २६ जिल्लामा गरिव परिवार पहिचान गरिएको छ भने १२ जिल्लामा पहिचान कार्य भइरहेको छ । सन् २०३० सम्म नेपालले गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने प्रतिवद्धता गरेको छ ।
भोकमरी सूचकाङ्क, २०१९
यस प्रतिवेदनमा नेपाल ७३ औँ स्थानमा (२०.८ अंक) पर्न सफल भएको छ । जम्मा ११७ वटा देशमध्ये पहिलो स्थानमा बेलारुस परेको छ भने अन्तिम स्थानमा सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपव्लिक परेको छ ।
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र स्थापना
काठमाण्डौको कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमा वि.सं. २०७६ कात्तिक १ गते उद्घाटन गरिएको झन्डै ८ करोड रुपैयाँको लगानीमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । युवा वैज्ञानिक तथा सामाजिक अभियन्ता महावीर पुन केन्द्रका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का नयाँ अध्यक्षमा पन्त
एनआरएनको वि.सं. २०७६ असोज ३० मा भएकोनिर्वाचनमा एनआरएनएका अध्यक्षमा कुमार पन्त निर्वाचित हुनुभएको छ । उक्त निर्वाचनको नतिजा वि.स २०७६ कात्तिक १ मा आएको थियो । आफ्ना प्रतिस्पर्धी कुल आचार्यलाई परास्त गर्दै पन्त विजयी बन्नु भएको हो ।
अर्थशास्त्र तर्फको नोवल पुरस्कार, २०१९
अभिजीत बनर्जी (भारत), एस्तर डुफलो (फ्रान्स) र माइकल क्रेमर (अमेरिका) लाई यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार संयुक्त रुपमा प्रदान गरिएको छ । उनीहरूको वैश्विक गरीबी निवारणको प्रयोगात्मक दृष्टिकोणका लागि यो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । हालसम्म यो पुरस्कार पाउने एकमात्र महिला एलिनर ओस्ट्रोम (सन् २००९) हुन् । यो पुरस्कारको राशि ९० लाख स्विस क्रोनर वा करिब १० लाख डलर रहेको छ ।
तलको नमुना सेट हल गर्नुहोस् –